Rooder Technology Limited na-dị na Shenzhen. Anyị na-agbalịsi wulite TOP ika nke electric scooters na China. Site na ọtụtụ afọ nke mmepe, na anyị anọwo na a maara nke ọma ma na anụ ụlọ na esenidụt. Anyị ọrụ otu na-pụrụ iche na onwe adịzi scooters, hoverboards na skateboards imewe, n'ichepụta, ahịa na ọrụ. Anyị ewepụtara enye ndị magburu onwe mkpụmkpụ-anya iga ngwaọrụ nke mmadụ site n'ịgbaso ihe-elekọta mmadụ ọrụ nke ike na-azọpụta, ala carbon na gburugburu ebe obibi nchebe.
Anyị ụlọ ọrụ esetịpụ nọmba nke onwe ha ikike arịa amamihe ma isi technology. Na-emepe emepe ebumnuche nke ike-azọpụta, na gburugburu ebe obibi nchebe, anyị nwetara asambodo nke OA, FCC, RoHS na nditịm arapara management usoro ISO9001. Site afọ nke-eto eto, anyị na-ulo oru Rooder a ole na ole ọhụrụ ụdị scooters.
Anyị scooters / hoverboards / stakeboards na e rere ndị n'ụwa nile na ọtụtụ-eji onye ugbo ala, ndị uwe ojii na ọrụ, Metro ebu, ọdụ na nnukwu pavilions, sinik tụrụ na golf ọmụmụ, wdg
Anyị ụlọ ọrụ-ekwu ná nkwado enterprise tụụrụ ime nke egwu nke ọdịdị, na anyị kweere na sayensị na-agbanwe ndụ guzosie mbara imewe na R & D usoro nke smart n'èzí sports ngwaahịa na onye ugbo ala. Anyị nwere ihe ndị kasị ọkachamara na ahụmahụ imewe otu na ubi, na anyị na-enwe na oké egwu onwe ha patent technology, elu ule ngwá na n'ichepụta isi nke ana achi achi zuru okè na ngwaahịa. Anyị onwe ha R & D ikike e ukwuu kwetara site na ụlọ ọrụ, na anyị anọwo na a maara nke ọma na ịdị n'otu nke elu-tech enterprise.
Site na-ewere na-arụ ọrụ style of kpọrọ ihe, oru oma, ịdabere, nraranye, na-esi ọnwụ, anyị mgbe niile melite ngwaahịa àgwà na anyị na-ejere, ka afọ ju anyị ahịa.
Anyị ọhụụ bụ Mee Life ihe ọma, Mgbanwe na Healthy.